Golayaasha Baarlamaanku ma badbaadin karaan danbiilayaasha? | KEYDMEDIA ONLINE
29 July 2021 Heerka Saddexaad ee COVID-19 oo ka dillaacay dalka
29 July 2021 Senataro lagu dooranayo Kismaayo
Golayaasha Baarlamaanku ma badbaadin karaan danbiilayaasha?
Kooxdii dalka ku heysay kadeedka karaaraha dhaafay, afartii sano ee la soo dhaafay waxa ay doonayaan in ay gabaad ka dhigtaan qodobka 70aad ee dastuurka Dowladda Fadaraalka, iyaga oo ka mid noqonaya Baarlamanka soo socda.
MUQDISHO, Soomaaliya - Sida wararku sheegayaan, Kooxdii afartii sano ee la soo dhaafay dalka burburisay ee Farmaajo iyo Fahad hoggaaminayeen, waxa ay qorsheynayaan in ay intooda badan ka mid noqdaan, Baarlamaanka soo socda si ay uga badbaadaan dacwadaha ka dhanka ah ee looga gudayo gabbood-falladii ay dalka ka geysteen muddadii ay xilka hayeen.
Qodobka 70aad ee dastuurka Dowladda Fadaraalka, waxuu ka hadlayaa xasaanadda Xildhibaannada golaha shacabka, faqradiisa labaad ayaana dhigeysa, in iyadoo aan la haysan oggolaanshaha Baarlamaanka Federaalka aan Xildhibaanka lagu qaadi karin dacwad ciqaabeed; la xiri karin, lana baari karin qof ahaan, hoygiisa ama meeshii kale ee u gaar ah, Sidoo kale haddii aan laga helin oggolaansho Golaha Xildhibaanka lama qaban karo, xabsina laguma hayn karo iyadoo la fulinaayo xukun maxkamadeed oo xataa kama dambays ah.
Eedeysanayaasha, waxa ay aaminsan yihiin in fursadda kaliya ee ay ku badbaadi karaan ay tahay ka mid noqohada Baarlamaanka soo socda, si ay ganbad iyo gaashaan uga dhigtaan qodobkaan.
Sida ay hore u baahisay Keydmedia online, Macluumaad ay heshay KON ayaa sheegaya in maalmaha soo socda ay xilalka banyan doonaan taliyaha Cidanka Booliska Soomaaliya, Jenaraal Cabdi Xasan Maxamed ‘Xijaar’, iyo taliyaha Ha’adda Nabad-sugidda iyo Sir-doonka Qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, si ay u raadsadaan kuraas Baarlamaan.
Farmaajo, ayaa u sharaxan inuu noqdo xildhibaan aan dhicin, halka koox dhalinyaro ah oo ku hareereysan oo uu hoggaaminayo Guddoomiye ku xigeynka Amniga iyo Siyaasadda Gobolka Banaadir, Cali Yare Cali, la doonayo in loo boobo kuraas, si qudhoodu u badbaadaan.
Hadaba su’aasha is weydiinta mudan ayaa ah, qorshahaan maku badbaadi karaan, maafiyada burburisay Soomaaliya afartii sano ee lasoo dhaafay?
Haddii Guddoonka Golayaasha Baarlamaanka soo socda uu noqdo hoggaan madax bannaan, wuxuu qaban doonaa mooshin xasaanadda looga xayuubinayo eedeysanyaashaan, oo ay soo diyaari doonaan Xildhbaanno wakiil ka ah dadka iyo degaanka ay dulmiyeeen, waxaana dacwad ku soo oogi doonta xeer-ilaalinta Qaranka.
Waa in la sameeyo guddi soo baara dembiyada ay Farmaajo iyo Koxdiisa dalka ka galeen Afartii sano ee la soo dhaafay, kuwaas oo ay ugu horreeyaan, dhiibiddii Qalbi-dhagax, Weeraradii CC Warsame iyo Cabdiqeybdiid, isku daygii dil ee Madaxdii ka horreysay, ku tagrifalkii awoodda, kala qeybintii ciidanka, dhalinyarada ay ka iibsaden Itoobiya, caburintii shacabka, doorashoyinkii la boobay, dadkii lagu laayay Baydhabo iyo Dhuusamareeb, cunaqabateyntii Kismaayo, iyo lacagihii loo adeegsady in xilalka looga tuuro madax uu ugu horreeyay Gudduumiyihii Golaha Shacabka Maxamed Sh. Cismaan Jawaari.
Waa in shacabku bilaabo, olole ka dhan ah maafiyada dalka baylahda ka dhigtay, isla markaana si buuxda loogu diido qabashada xil qaran iyo in lagu aamino xoolo dad-weyne.
Heerka Saddexaad ee COVID-19 oo ka dillaacay dalka
Warar 29 July 2021 8:20
Sida ay warbixin ku soo saartay wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya, waxaa sii kordhaya tirada dadka Soomaaliyeed ee uu ku dhacayo cudurka Covid-19.
Senataro lagu dooranayo Kismaayo
Warar 29 July 2021 2:05